काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा भावी सभापतिका लागि करिब एक दर्जन आकांक्षी देखिएका छन् । २२ असारको केन्द्रीय समिति बैठकले सबै तहको अधिवेशनको मिति परिमार्जन गरी महाधिवेशन आगामी फागुन ७–१० मै गर्ने निर्णय लिएपछि आकांक्षीको दौडधुप सुरु भएको छ ।
जसले काँग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । कोरोनासंक्रमणले महाधिवेशनको गतिविधिमा चार महिना ब्रेक लागे पनि साउन पहिलो साताबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण जारी छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्येनजर गरी चैत पहिलो साताबाट महाधिवेशनका गतिविधि थाती राखिएकोमा २२ असारको केन्द्रीय समिति बैठकले फेरि अगाडि बढाउने निर्णय लिएको थियो ।
कोरोना महामारीको जोखिम अहिलेभन्दा बढेन भने निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने गरी काँग्रेसमा गतिविधि भइरहेको छ । सदस्यता वितरण, सदस्यता नवीकरण सुरु भएसँग पार्टीको भावी सभापतिका आकांक्षीहरूले दौडधुप बढेको छ । आकांक्षीहरुबीच आ–आफ्नो अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आन्तरिक छलफल र मिडियामार्फत् प्रचारबाजी चलिरहेको छ । सभापतिमा दोहोरिने मनसायका साथ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मनोनयन र नियुक्तिमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
१३ औँ महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग पराजय भोगेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कार्यकर्तासँगको भेटघाट र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत् फेरि उम्मेदवार बन्ने छनक देखिन्छ । यस्तै उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुननसिंह केसी, रामरशण महत, शेखर कोइराला र गगन थापाबाट भावी सभापतिको आकांक्षा प्रकट भएको छ । वर्तमान परिदृष्यले काँग्रेसमा स्थापित तीन वटा गुटबाट १० जना नेता सभापतिको आकांक्षी रहेको देखाएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कसैले पनि आधिकारिक रूपमा घोषणा नगरेकाले कसको आकांक्षा कहाँ पुगेर कुन ब्रागेनिङमा टुङ्गिन्छ, पत्तो छैन ।
दश नेताको दौडधुप
अहिलेसम्म सभापति देउवा भावी सभापतिका लागि आफै उम्मेदवार बन्ने मुडमा रहेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन् । देउवाले पार्टीका विभाग र विभिन्न निकायमा सदस्यहरू समेत धमाधम थपिरहेका छन् ।
देउवाका पछिल्ला कदम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट चुनिने ४ हजार १ सय २५ महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथि प्रभाव जमाउन केन्द्रित देखिन्छ । अहिले केन्द्रीय विभागमा परिरहेका नेता तथा कार्यकर्तामा अधिकांश क्षेत्रीय प्रतिनिधि भइसकेका र फेरि पनि चुनिएर आउने सम्भावना भएकाहरू हुन् ।
यस्तै देउवाले फागुन १९ गते ३० र बुधबार ४ सय ७९ पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा ल्याउने कदमलाई पनि महाधिवेशनसँग जोडिएको छ ।
पार्टीका सक्रिय राजनीतिमा नरहेका पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री तथा सांसददेखि पार्टीको पूर्वदाधिकारी तथा कार्यकर्तालाई देउवाले राजनीतिज्ञ सभामा मनोनय गरेका थिए । उनीहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनेर पठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने पात्रका रुपमा हेरिन्छ । यसले देउवामा फेरि सभापति बन्ने उत्कट आकांक्षा दर्शाएको छ ।
यसैगरी, वरिष्ठ नेता पौडेलले समेत आफू निकट नेताहरूमार्फत सभापतिका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिँदै आइरहेका छन् । सभापतिको सन्देश दिने गरी नेता पौडेलले अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि कार्यकर्तासँगका भेटघाटमा पनि बाक्लिएको छ ।
पछिल्लो समय उनी सभापति देउवाका हरेक निर्णय विरुद्ध आक्रमक देखिन थालेका छन् । देउवाभन्दा एक वर्ष जेठा पौडेलले उमेरका आधारमा मूल्याङ्कन नहुने बताएका थिए ।
देउवा र पौडेलबाटै काँग्रेसमा पुनर्ताजकी सम्भव नभएका विश्लेषण भइरहँदा पौडेलले शनिबार एक कार्यक्रमा भने, ‘उमेर समूह एउटै हुँदैमा योगदान, चरित्र र क्रियाकलाप एउटै छ त ? पदमा हुँदा शक्ति दुरूपयोग ग¥यो वा गरेन खोज्नुप-यो । म चुनौती दिन चाहन्छु मैले दुरूपयोग केहि गरेको छैन, खोज्नुहोस् ।’
पारिवारिक विरासतबाट राजनीतिमा उदाएका शशांक, प्रकाशमान र शेखरले सभापतिमा आकांक्षा देखाइरहँदा पौडेलले
धुलोबाट आएको नेतालाई छोड्न तयार’ रहेको भन्दै विरासतको राजनीति नस्वीकार्ने सन्देश दिए ।
युवा नेता छोड् छोड् भन्छन् । म प्रतिक्षामा छु । भारतमा मोदी कसरी आए ? उनीभन्दा सिनियर नेता थिए त्यहाँ पनि । माटो, धुलोबाट उठेको नेता आओस् छोड्न तयार छु,’ पौडेलको भनाइ थियो ।
१३ औँ महाधिवेशनमा पार्टीमा तेस्रोधारको नेतृत्व गर्दै आएका नेता सिटौलाले समेत पार्टी नेतृत्वका लागि आकांक्षा दर्शाएको पाइन्छ । उनले महाराजगञ्जमा भेटघाटका लागि कार्यालय नै खोलिसकेका छन् । सिटौलालले कार्यर्तासँगको छलफललाई पनि तीव्रता दिएको उनको सचिवालले बताएको छ ।
केही महिनाअघि गृह जिल्ला झापाबाट सिटौलाले १४ औँ महाधिवेशनमा पनि सभापतिका लागि आफ्नो उम्मेदावरी रहने उद्घोष गरेका थिए ।
केन्द्रमा आफ्नो गुट अस्तित्व कायम गर्दै जिल्ला तहबाट महाधिवेशनको शक्ति आर्जनमा केन्द्रित देखिन्छन् । यस्तै उपसभापति निधिसमेत सभापतिका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिन प्रयासरत छन् । संस्थापन पक्षसँगै उनले संस्थापन इतर पक्षसँग पनि छलफल र संवाद बढाइरहेका छन् । केही दिनअघि निधिले आफूलाई भेटेरै सभापतिमा सघाउन आग्रह गरेको शशांक कोइरालाको दाबी छ ।
तर निधिले देउवासँगको छलफल र सहमति बेगर सार्वजनिक रुपमा सभापति प्रकट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । १४औँ महाधिवेशनमा देउवा आफै उम्मेदवार भए निधिले आफू उम्मेदवार हुने नहुनेबारे छलफल गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।
यता महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले समेत आफू पार्टी नेतृत्वका लागि तयार रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्यका लागि आफू उपयुक्त पात्र भएको उनको जिकिर छ ।
उनले पौडेल समूहमा उपगुट निर्माण गरि भावी सभापतिका लागि कसरत बढाइरहेको पाइन्छ । शशांकले हालै मात्र भेटघाटका लागि भनेर महाराजगञ्जस्थित निवाससँगै जोडिएको एक घर भाडामा लिएका छन् ।
काँग्रेस पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता सिंहले पनि आगामी महाधिवेशनमा आफू पनि नेतृत्वको आकांक्षी रहेको उद्घोष गरिसकेको अवस्था छ । पौडेल समूहमा रहेका सिंह पनि उपगुट निर्माण गरि भावी सभापतिका लागि महोल सिर्जना केन्द्रित देखिन्छन् । उनले बिजुली बजारमा निर्वाचनका समयमा खोलेको सम्पर्क कार्यालयलाई भेटघाटको थलो बनाएका छन् ।
तर चाक्सीबारीस्थित सिंह निवासमा भेटघाट र चहलफल बढी छ । पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने अभिलासासहित गत हिउँदमा देश दौडाहमा निस्किएका सिंह यतिबेला आन्तरिक भेटघाट र छलफलमा व्यस्त भएको पाइन्छ ।
यस्तै काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पनि १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको आकांक्षा पालेका नेता हुन् । पौडेल समूहमा रशेका शेखर पनि गुट निर्माणमा संघर्षरत छन् । उनले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पहुँच विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ ।
उनले कोरोना संक्रमणका बीचमा उपत्यका बाहिर नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाटलाई सामाजिक दुरी कायम गरेरै निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
संस्थापन इतर पक्षबाट सभापतिको एकल उम्मेदवार तय गराउन सक्रिए देखिएका नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि सभापतिको आकांक्षी मानिन्छन् । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफूभन्दा सिनियर नेता नभएको दाबी गर्दै नेता केसीले १४ औँ महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदावरी स्वाभाविक हुने तर्क राख्छन् ।
नेता केसीको निवासमा पनि नेता कार्यकर्ताको चहलपहल बढ्दो छ । केही दिनअघि सभापति देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दी पनि नेता केसीकै निवासबाट तय गरिएको थियो ।
१३ औँ महाधिवेशनमा देउवा टिमबाट महामन्त्रीमा पराजित भएका केसी गत आम चुनावपछि पौडेल समूहमा जोडिएका थिए ।
यस्तै पूर्वसहमहामन्त्री रामशरण महतले पनि आफूलाई सभापतिका रुपमा गर्दै आएका छन् । उनले पनि मिडिया र सभा समारोहमा सभापतिका आकांक्षा दर्शाउँदै आएका छन् ।
यस्तै काँग्रेस युवा नेता गगन थापाले समेत आफू सभापतिको आकांक्षी हुन सक्ने सन्देश दिएका छन् ।
साउन १० मा राजधानीमा काँग्रेसका १३ युवा नेता सम्मेलित कार्यक्रममा आफू पार्टी नेतृत्वका लागि तयार रहेको संकेत गरेका थिए ।
१३ औँ महाधिवेशनमा सिटौला समूबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार भएर पराजित भएका थापाले युवा नेताहरु नेतृत्वमा आउन हिम्मत गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीमध्ये तपाईंहरु कसैले हिम्मत गर्नुहुन्छ भने पनि ठीक छ, म सहयोग गर्छु । मलाई सहयोग गर्ने हो भने म अघि बढ्न तयार छु,’ थापाको भनाइ थियो ।
महामन्त्रीको कसरतमा रहेका थापा बलियो टिममा स्पेस पाउने सम्भावना कमजोर देखिएपछि सभापतिमै उम्मेदवारी दिनेगरी आन्तरिक रणनीति बनाइरहेको उनी निटस्थहरु बताउँछन् ।a
काभ्रे क्याम्पस प्रमुख सहित संचालक समिति अध्यक्ष र सदस्य फरार सुचीमा ।
आजको मौसम पूर्वानुमान।
तपाईंको आज ! हेर्नुस आजको राशिफल ।
‘आमाको साथी हुँ’ भन्दै बालबालिकाको सुन लुट्ने महिला पक्राउ
काभ्रे क्याम्पस प्रमुख सहितलाई पक्राउ पुर्जी ! कानुनत कलेज प्रमुख बैदार निलम्बित ! तथ्य सहित ठगीको चिरफार । 11 views
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपलब्धि, युसिएलजी एसपिएसी प्यासिफिकको उपाध्यक्ष पदमा अशोक ब्याञ्जु निर्विरोध निर्वाचित ।3views
दोस्रो पाँचखाल महोत्सव असोज २९ देखि3views
मुख्यमन्त्रीसहित १६५ को कोरोना रिपोर्ट आयो3views
१५३ कोरोना संक्रमितको आइसियूमा र भेन्टिलेटरमा उपचार गराउदै3views
अनेरास्ववियू काभ्रेले प्रहरीका लागि माक्स, पन्जा र सेनिटाईजर हस्तान्तरण3views
कोरोना लाग्न नदिने पूर्वरोकथामका रूपमा आयुर्वेद औषधि3views
महामारी सुरु भएयता चीनमा पहिलो पटक नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेन3views
७१ जना पत्रकारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुन प्रदेशमा कति ?3views
पोलेको मकै खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा3views
बामदेव गौतमलाई सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काभ्रे कलेज प्रमुख बैदार सहित ३ विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर ।
प्रदेश सरकारको १८ करोड बजेटमा हिलेजलजले तालबन्दै
नमोबुद्धमा रेबिज सप्ताह सुरु
यस्तो छ काभ्रे बनेपाको अवस्था तस्बिरसहित हेर्नुहोस् : लकडाउन
अमेरिकी स्वास्थ्य विभागले पुनः फेर्‍यो दिशानिर्देश
अनुराग माथीको आरोपमा बोलिन् पूर्व श्रीमतीः ‘सबैभन्दा घटिया व्यवहार’
फेसबुकमाथि लाग्यो ईन्स्टाग्राममार्फत जासुसी गरेको आरोप